IPwnageTool 3.1.5 -Uhlaziyo lweJailbreak nge-OS 3.1.3 kwiMac | IPhone iindaba
IPwnageTool 3.1.5 -Uhlaziyo lweJailbreak ngeOS OS 3.1.3 kwiMac
Ekuseni ngentseni izolo, unike ibali leendaba ekuthiwa ngalo Kwezihlunu, ilungu le Iqela, Ndenze ingxelo ku ngeTwiter, eyacacisa ukuba inguqulelo entsha yePwnageTool ikufuphi, yokuvula i-firmware ye-3.1.3.
Ewe, kwiiyure ezimbalwa kamva i-DevTeam yayisele iyenzile kwaye ikhuphe inethiwekhi entsha kwinethiwekhi Ityala 3.1.5, kwi I-3.1.3 yeFirmware.
IPwnageTool, njengoko uninzi lwenu sele niyazi, yisoftware ekuze kube ngoku Jailbreak ngokusebenzisa a I-firmware yesiko (Elungisiweyo) yeMac, ukusukela kule mihla ubonile ukuba isoftware entsha ivele, i-Sn0wbreeze yeWindows.
Ngoku akukho software yokuvula Ngayo nayiphi na i-SIM, ke ngoko, iJailbreak kufuneka yenziwe kuphela kwii-iPhones ezinemvelaphi ESIMAHLA okanye ezisebenzisa iSIM yomsebenzisi wokuthenga we-iPhone.
El Isixhobo sePwnage 3.1.5Inokukhutshelwa apha:
Qhagamshela kwi IPhone Firmware ukukhuphela
Inguqulelo yamva nje iTunes, enokukhutshelwa apha:
Ukuhambelana ngezi zixhobo zilandelayo:
Ukuze wazi i iBoot uyayibona kolu qeqesho alwenzileyo Yord2000 (Imodareyitha yeForam yethu)
iBoot kwii-3Gs zakho
IPod Touch 2G (hayi iMC)
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » IPwnageTool 3.1.5 -Uhlaziyo lweJailbreak ngeOS OS 3.1.3 kwiMac
Molweni bantu nisebenza nabo!
Ndine-3Gs yasimahla yemvelaphi, kwaye ngaphambili bendingumsebenzisi othembekileyo waseCydia, nangona kunjalo bendingafuni ukwenza iJalibreake kwi-iPhone yam, kuba ngokwento endandiyifunde kwiinyanga ezidlulileyo, iApple ingabhalisa kwi-iPhone i-JB yenziwe, nanjengoko oku kuguqulwa kwesoftware ngenxa yoko iwaranti ilahlekile. Ngaba umntu othile nceda undazise malunga nayo. Kungenxa yokuba bendifuna ukusebenzisa i-Cydia kwakhona iinyanga kwaye ngenxa yesi sizathu andenzanga Jailbreak kwisiphelo sam. Sele ndiyenzile i-FW ngePwnagetool.
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho.
I-Salu2 evela eJamani :-)
Ukuba unayo i-iPhone yasimahla yasimahla, unayo njengam kwaye sele ndinayo i-jailbreak nge-3.1.2, akukho ngxaki.
ngale mvakwemini ukuba ndinexesha ndizakupasa u-3.1.3
Ukuba iApple iyayibhaqa, kunjalo, isiqinisekiso silahlekile, kodwa ndicinga ukuba i-iPhone yakho ukuba isimahla ayiveli eJamani, ke ngoko isiqinisekiso asisebenzi eJamani, kuba sisebenza kwilizwe lokuthenga.
Ndikunye ne-iphone 3gs ene-basebad elungileyo, i-iboot elungileyo kunye no-3.1.3 ngekhe uvalelwe nge-PwnageTool 3.1.5. Ibonisa impazamo ye-1600 xa uzama ukufaka isiko elenziwe yiPwnageTool 3.1.5.
Molo uBerllin !!
Enkosi ngempendulo yakho. Ukuba unyanisile, i-terminal yam ayiveli eJamani, ukuba akunjalo, ivela e-Itali, nangona kunjalo, isiqinisekiso sihlala sisebenza apha eJamani ngenxa ye-Applecare yam ye-iPhone, kuba ifowuni ayinayo imvelaphi kunye nengxabano endiyenzayo undifumanele kufanelekile :-). Kungenxa yoko le nto ndingakhange ndibenesibindi sokwenza iJailbreake. Ngaba uyazi ukuba ndingayenza njani iJailbreake kwaye ukuba umba nge-Apple awuqatshelwa? Ndicinga ukuba kufuneka urekhode i-ICEI okanye into enjalo, akunjalo?
Ndilindele impendulo yakho ngexhala !!
Yeyiphi i-Baseband onayo?
Masibone ukuba ngubani onokundinceda ngombuzo.
Isivumelwano sam siphela kwiinyanga ezi-4, ndiyaqonda ukuba banyanzelekile ukuba bandikhulule. Ukuba ndiyayihlaziya ibe ngu-3.1.3, bangayenza ????
Okanye izakundinika ingxaki.
Kwaye iyayisombulula ingxaki yePush kwii-iPhones ezigqekeziwe?
Kungenxa yokuba ndihlaziye kutshanje ukuba ngu-3.1.2 kwaye ngokulungisa i-Push iyitya ibhetri kwi-3 okanye iiyure eziyi-4
Ke andinaPush ...
Ndinee-3Gs ezine-FW 05.12.01, inguqulelo engu-3.1.3, iBoot 359.3. Ukulinda impendulo :-)
Ukukhutshwa kwe-iPhone esemthethweni ayixhomekeki kuhlobo luni lwe-OS OS onayo, ukuba akunjalo, kwisivumelwano sakho sokusebenza ngokusisigxina nomqhubi. Ukuba yena
I-iPhone eza kukhutshwa ingaphezulu kweminyaka emibini ubudala okanye kwisivumelwano esasifunyenwe, banyanzelekile ukuba bayikhulule isebenze ngayo nayiphi na i-SIM. Ukuze ukhululwe kufuneka unxibelelane nomsebenzisi wakho, emva koko nge-iTunes iya kuvulwa ngonaphakade :-).
Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda.
enkosi jonathan. Ndiyathetha, ndingayiphula ngejele ngePwnageTool 3.1.5 ngaphandle kwengxaki yokukhululwa okulandelayo. Ndiyitsho ngenxa yale nto ithi ngasentla, andiyiqondi kakuhle:
Okwangoku akukho software yokuvula kuyo nayiphi na i-SIM, ke ngoko iJailbreak kufuneka yenziwe kuphela kwii-iPhones eziSIMAHLA zemvelaphi okanye ezisebenzisa i-SIM yokuthenga i-iPhone
Ukuba usebenzisa i-iPhone yakho kunye nomsebenzisi osemthethweni welizwe lakho, unokwenza i-jailbreak ngaphandle kwengxaki. Kuba awudingi ukuvula iSIM. Isibhengezo esingentla sesabo bafuna iJailbreak ukufaka isoftware yokuvula iSIM, enje nge-ultrasn0w okanye iBlacksn0w, yiyo loo nto ukuba usebenzisa ezi nkqubo kwi-iPhone yakho akufuneki uyihlaziye vs 3.1.3, kuba ezi ayizizo ixhaswe kwinguqulelo entsha.
Kuba eyakho isimahla, jonga ukuba ungayikhuphela kwi-3.1.2 kwaye udlulise iBlackra1n kuyo:
Kulungile Berllin! Enkosi ngoncedo lwakho.
Ndiza kuzama ukuvavanya nge-FW ondinike yona. Nangona kunjalo ndiza kuzama nge-FW 3.1.3 esele ndiyenzile kunye ne-Pwngetool, ithiyori kufuneka isebenzele mna.
Ndiza kuyihlaziya ibe ngu-3.1.2.
esque Ndidinga ukuyilayisha ukuze ndisebenzise ezinye iinkqubo ezingandisebenzeliyo nge-3.0.
ngenxa yokufuna ukwazi. Kutheni undicebisa ukuba ndingazihlaziyi?
«Masibone ukuba ngubani onokundinceda ngombuzo.
Kule nto bendifuna ukukuxelela ukuba ungavuseleli i-firmware esemthethweni, naphantsi kwazo naziphi na iimeko, kwimeko apho, kuba unokufaka i-Baseband.
NgePwnageTool ukuba ungayenza.
Ngendlela abanyanzelekanga ukuba bayikhulule, kuba akukho nto ibhaliweyo.
I-Movistar ukuba awufumani nto ingathandekiyo njengesiqhelo ayizukuyikhulula.
Nantoni na oyenzayo, soloko uyenza ngenkqubo engaphakamisi i-baseband yakho. Sukuyifaka ifayile esemthethweni engu-3.1.2
aaaa. Ewe Ewe. Bendicinga ukuyenza ngePwnageTool.
Ndacinga ukuba ukuba kunyanzelekile ukuba babakhulule bakugqiba isivumelwano nabo.
kulungile ... iya kuba lithuba lam lokuba ndiyenze. yena yena.
Molo eBerlin, ihpone yam yi2g ndiyithengile e-US kwaye bekusoloko kufuneka ndiyivulile kuba khange ikhululeke, kutsha nje ichithwe kwaye kufuneka ndiyibuyisele kwinguqulelo 3.1.3 kodwa andiyifumani uyivule, ungandinceda nceda, Enkosi kakhulu!
molo, ndine-3gs ye-iphone 3.1.3 kwaye ndifuna nje ukwazi ukufaka i-zydia, ukwenza ngokwezifiso kwaye ndizama ukusebenzisa isixhobo se-pwnage 3.1.5 umntu angandixelela ukuba ndenze njani enkosi kakhulu ...
Molweni nonke, ndiyabulisa ndinombuzo, ndinenguqulo 3.1.3 kwi-ipone yam kodwa andikwazi ukufaka i-cydia kuba andazi ukuba ndingayenza njani, ndingayikhuphela phi, kuba ndingathanda ukukhuphela usetyenziso lwam I-ipone ayinayo imibuliso kwaye iphendula ngokukhawuleza sitsho
Yeyona ilungileyo, apho ii-iponeros zingabelana ngolwazi
Phendula wonke umntu, imibuliso, ndinombuzo, ndinenguqulo 3.1.3 kwi-ipone yam kodwa andinakukwazi ukufaka i-cydia kuba andazi ukuba ndingayenza njani kwaphela, endaweni yokuba ndiyikhuphele phi, kuba ndingathanda Ndiyathanda ukukhuphela usetyenziso ukuba ipone yam ayinayo imibuliso kunye nempendulo ekhawulezileyo
Ungaphula kuphela i-3Gs ukuba une-iBoot endala
Molo, ndicinga ukuba oku kuya kusenzeka .. UZA kundinceda?… Umzala wam undiphathele i-iPhone 3G yakhe (kuba ithi ibivaliwe emva kokufaka umculo kuyo), ndiyidibanise ne-iTunes yaphuma kuphela, « Awunakho ukufikelela kwi-iPhone "Mzala" kuba ivaliwe, faka ipaswedi .. Kwi-iphone kuphela kuphume ilogo ye-itunes kunye nentambo ye-usb, phezulu ngasekhohlo imigca embalwa _ _ _ _ kwaye ngasekunene ibhetri, ezantsi kweqhosha lokwenza iminxeba engxamisekileyo.
Iyonke yokukhuphela i-firmware 3.1.3 kwaye uyihlaziye kwi-iTunes ...
kodwa ibisafana, ngena kwiseli, kodwa wathi ngentla "Akukho Nkonzo." Iyonke le redsn0w ayigqithisileyo, kunye ne-cydia. Iphayinaphu yaphuma, ndangena esiseleni ndabe ndibeka "i-shoutcast radio" kuyo .. KODWA UNGAYIBEKI i-ultrasnow kuyo, qala kwakhona kwaye akukho nto yenzekayo, i-sim ibingazukusebenza, KUNYE NAMANYE AMANYE I beka i-Blacksn0w ngoluhlobo .Ndicinga ukuba .. iphinde yaqala ukufa.
Kuphela iapile emhlophe yaphuma yaza yanamathela apho, ayisandivumeli ukuba ndiyibuyise, isikrini esimhlophe sivela apho sihlala kwaye iifestile zitsho amaxesha amaninzi ... ukuba isixhobo esixhumeke kwi-USB sineengxaki kwaye ukusuka apho besele sife. .
NDENZA NTONI NGOKU? IAA ayifuni nokutshaja ibhetri, .. uphawu lweBattery luphuma ngomgca oBOMVU, (umbane) uvela ngezantsi emva koko (iplagi + umbane) ukusuka apho ubuyele (kumbane) emva koko (iplagi + imibane) emva koko (umbane) emva koko (iplagi + imibane) kwaye ukusuka apho AKUKHO KWENZEKA. 🙁
Ngaba ikhona into onokuyenza? Andinayo i- $$$ yokuthenga umzala wam.
ukulungiswa andiyibeki iblacknow .. Ndafaka i-blackra1n .. 🙁
ijuba lam sitsho
Kutheni ukhuphela inkqubo ukuba ayinakuvulwa, ubuncinci uchaze kwikhonkco ukukhuphela umama ukuba uvuliwe okanye usetyenziswa njani
Phendula ihobe lam
Ndithenge i-iphone 3g kwi-at & t yeza ne-3.1.3m emva koko okanye bendifuna ukuvula i-movistar nicaragua kwaye ayisebenzi kum, ufake i-firmware kodwa indinika kuphela iminxeba engxamisekileyo endinokuyenza Ndiphelelwe lithemba kwaye khange ndilale ubusuku bonke!
NgesiJamani akukho ndlela yakukhupha i-iphone 3g / s ene-firmware 3.1.3, ndikule ngxaki
@German Ukuba sele uyiphumezile intolongo, kunye nenaninas ... ngenisa «Cydia» Ndiyathemba ukuba uyifakile ... ukusukela apho ukhangela into ebizwa ngokuba yi "Fuzzyband» efakiweyo, yibaleke, UKUBA UNETHEMBA , iyakukuxelela ukuba ukuba ungathobela iBaseBand (kwi-v4.26 ndicinga), ukuba yile nto iyiyo, mayiyenze, Emva koko nge-CYDIA efanayo, ubeka i "ultraswn0w», Yenziwe, Qala kwakhona. ..
Emva kwexesha ndibhaqa i-chip kunye nenethiwekhi ye-TELCEL. 🙂
nditsho nge-firmware 3.1.3 ngobuwula, ndiyayihlaziya ngesandla i-lol kuba i-iTunes ayinakukwazi ukuyikhuphela le nto ikhutshelweyo. 😛
Thetha ukuba ihambe njani!